Ismaamulka Somalida Ogadeeniya oo Sheegay in Gabalka Sool Laga Yaabo in uu Maamulkooda ka Mid Noqdo. – Rasaasa News
May 13, 2010 Ismaamulka Somalida Ogadeeniya oo Sheegay in Gabalka, Sool uu Soo Raaco Maamulka.
Ismaamulka Somalida Ogadeeniya ayaa dacwad u gudbiyey Isimada gabalka sool, iyaga oo ka cabanaya in qaar ka mid dadka ka soo jeeda gabalaka Sool ay taageero siiyaan kooxda Jwxo-shiil, arinkaas oo hadii ayna Isimadu wax ka qabanin ay u keeni doonto cawaaqib xumo.
Marar hore oo dhawr ah, ayaa isimada lagu eedeeyey in ay hoysiiyeen Jwxo-shiil, uuna joogay degmada Buuhoodle muddo shan bilood ah bilowgii sanadkii 2009. Waxay ciidamada Ismaamulka Somalida Ogadeeniya galeen magaalada Buuhoodle dhawr goor iyaga oo daba jooga, tilmaamo ka yimid dhinaca degmada Buuhoodle.
Ismaamulka Somalida Ogadeeniya ayaa baadigoob ugu jira sidii uu colaada gabalka ugu badali lahaa nabad, waxayna lacago badan ku bixiyaan sidii dalka loo keeni lahaa muwaadiniinta u dhashay dhulka Somalida Ogadeeniya ee dibadaha ku nool.
Waxaana dhulka dib ugu noqday Aqoonleey, odayaal, dhalinyaro iyo fanaaniin ka ka yimid dibadaha oo doortay in ay ka qayb qaataan nabada socota.
Fanaanada Cadar Axmed Kaahin ayaa ka mid ahayd fanaaniinta dib dalka ugu soo laabtay, iyada oo awal hore ka mid ahayd dadka abuura colaada, ayey dadaal dheer noqotay shakhsi doortay in dadka nabad loo keeno.
Waxaa ayaan daro ah in Saado Cali Warsame, oo ku dhalatay gabalka Sool, ay maanta abuurto colaad ka dhacda Ismaamulka Somalida Ogadeeniya. Ficilada Saado Cali Warsame, ayaa lagama maarmaan noqday in looga dacwoodo Isimada gabalka Sool, si ay u ogaadaan in Sool ayna ka tirsanayn Ismaamulka Somalida Ogadeeniya, hadiise ay Sool noqoto meel laga soo abaabulo ficilo lid ku ah Ismaamulka Somalida Ogadeeniya in ayna ka fursanaynin in Sool la hoos keeno Ismaamulka Somalida Ogadeeniya.
Somali iyada ayaa is gubtay ayey yidhaahdeen masuuliyiin ka tirsan Ismaamulka Somalida Ogadeeniya, dhibaatooyina way naga soo gaadhaan. Gabalkii aan u aragno in uu lid ku yahay xasiloonida dhulka Ismaamulka Somalida Ogadeeniya waxaanu kaga hortagi ciidamada Ismaamulka oo haatan awood u leh in ay tagaan meel walba oo uu cadowgoodu joogo.
Jaadka oo la Ogaaday in uu Xanuuno Badan Dawo ka Yahay